तपाइँ के गर्नुहुन्छ को लागी तपाइँको डोमेन छोड्नुहोस् | Martech Zone
सोमबार, जनवरी 19, 2009 मङ्गलबार, अक्टोबर 7, 2014 Douglas Karr
कति जना व्यक्ति खोजिरहेका छन् के को लागी चिन्छ तपाईँ गर्नुहुन्छ? अब ... कति व्यक्ति वास्तवमै हेरिरहेका छन् तिम्रो लागि?
त्यसोभए ... यदि तपाइँ केको लागि इन्टरनेटमा फेला पार्न चाहानुहुन्छ भने तपाईँ गर्नुहुन्छ, किन तपाईं खरीद गर्नुहुन्छ तिम्रो नाम डोमेन नामको रूपमा र यसमा ब्लग राख्नु हुन्छ? तपाईं नचाह्न सक्नुहुन्छ। एक डोमेन नाम खरीद गर्नुहोस् जुन पहिले के प्रतिबिम्बित हुन्छ तपाईँ गर्नुहुन्छ। जबसम्म व्यक्तिहरूलाई थाहा हुँदैन तपाईं को हुनुहुन्छ, यो उनीहरूले तपाईंलाई कसरी फेला पार्नेछन्।
जब तपाईं पर्याप्त सामग्री र निम्न पाउनुहुन्छ, गुगल ले ख्याल राख्छ तिनीहरूलाई तपाइँलाई खोज्न दिँदै.
टैग: ब्रान्ड आक्रोशईमेलभिसनपहिलो प्रभावक्वेरी_ पोस्टहरूआक्रोशyougov
जनवरी 19, 2009 मा 12: 34 एएम
राम्रो सल्लाह। मलाई लाग्छ कि यो समान काम गर्दा म दोषी हुन सक्छु। हुनसक्छ यो मेरो व्यक्तिगत "ब्रान्ड" निर्माण गर्न चाहिरहेको थियो वा यो तथ्य हो कि मैले अन्य व्यक्तिहरूले यो गरेको देखे! मलाई दुई पटक सोच्न बाध्य पार्छ! चुनौतीपूर्ण पोष्टको लागि धन्यवाद!
महान सल्लाह डग। यो सम्भवत पहिलो सल्लाह हो जुन मैले वेबसाइट प्रदान गर्ने जो कोहीलाई दिनेछु। उदाहरण ... यदि तपाईं पपकर्न बेच्नुहुन्छ र तपाईंको कम्पनीको नाम प्राकृतिक हार्वेस्ट जस्तो केहि हो कि केहि हो। नाम लिदै http://naturalharvest.com एक मार्केटिंग दृष्टिकोणबाट एक धेरै नराम्रो विचार हुन सक्छ। यो हुनु बढी मूल्यवान हुनेछ http://popcorn.com । म पक्का छु कि ती दुबै यूआरएल लिइएको छ, तर तपाइँले विचार प्राप्त गर्नुभयो।
जनवरी 19, 2009 मा 11: 53 एएम
मैले यससँग संघर्ष गरें जब मैले पहिले मेरो साइट सँगै राख्न शुरू गरें। मैले "मलाई" को सट्टा "के" को साथ जाने निर्णय गरें किनभने मलाई थाहा थियो कि यो मेरो जीवनकालको लागि होइन, तर अन्य व्यक्तिको लागि स्रोत हुन चाहान्छु। मलाई लाग्छ कि यो योजना प्रक्रियाको एक महत्त्वपूर्ण चरण हो। तपाईंको सल्लाह सरल छ र पूर्ण अर्थ बनाउँदछ!
जनवरी १, २०१ 19 १२::2009 अपराह्न
मँ मँ सहमत छु, किन व्यक्तिहरू उनीहरूको नाम किन्न सक्छन भनेर म बुझ्छु, तर जबसम्म तपाईंसँग शक्ति शक्ति छैन, कुरा के हो? तपाईंको URL ले यो कस्तो प्रकारको साइट / ब्लग हो प्रतिबिम्बित गर्नुपर्दछ र पाठकहरूले के आशा गर्न सक्दछन्।